NoLocation, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Nandritra ny fotoana vitsivitsy izao, ny fiainana manokana dia nanjary singa lehibe ho an'ny mpampiasa maro ary rehefa miresaka momba ny fandefasana sary, manondro ny toerana misy azy ireo, manoratra fanehoan-kevitra ... mieritreritra indroa izy ireo. Fa koa Ny fampiasana ireo mpitety tranonkala ahafahantsika manafoana izay soritry ny fitetezana anay dia nitombo. Raha lasa paranoida kely amin'io lafiny io isika, rehefa avy nanao fiainam-bahoaka tamin'ny fomba feno, dia mety ho iray amin'ireo fampiharana manampy antsika amin'izany ny NoLocation. NoLotacion dia manala ny angon-drakitra misy amin'ireo sary nalainay, ka tsy ho azo atao ny maka ny toerana marina, betsaka na latsaka, avy taiza no nitondranay azy.
NoLocation dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 1,99 euro, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana amin'ny alàlan'ny rohy avelako amin'ny faran'ity lahatsoratra ity. Miaraka amin'ny NoLocation, tsy ny fampiharana fandefasan-kafatra rehetra no manafoana an'ity angon-drakitra ity rehefa voafintina alohan'ny handefasana azy, dia manala ireo fandrindrana GPS amin'ilay toerana, raha mbola navadikay tamina iOS nandritra ny taona vitsivitsy ity asa ity ary mamela anay handamina ny sary araka ny toerana misy anao.
Iray hitantsika fa nesorinay ny angona GPS avy amin'ny sarinay, Amin'ny alàlan'io fampiharana io ihany dia azontsika atao ny mizara azy mivantana amin'ny alàlan'ny rindranasa rehetra napetraka tao amin'ny fitaovantsika, na rindranasan-kafatra fandefasan-kafatra, tambajotra sosialy na mpamoaka sary. Tsotra be ilay fandidiana ary tsy mila fahalalana ianao. Na dia toa voafetra be aza ny asany, dia manatanteraka izay nampanantenainy izy ary maro ireo mpampiasa izay nitady fampiharana an'ity karazana ity hatrizay, ny rindranasa iray izay araky ny filazan'ny mpamorona dia hanampy asa vaovao mifandraika amin'ny toerana. Tsy maintsy miandry isika vao hahita ny fomba hahagaga antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » NoLocation, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Notsapainay ny Moshi Digits, fonon-tanana tsara indrindra ho an'ny efijery an'ny iPhone